Abavelisi beentambo zentsimbi ezingenazintsu-abaThengi baseTshayina beZiko leNtsimbi
I-Mesh engenasiseko yentsimbi
I-Ferrule Mesh engenazintsimbi
Mesh Ikheyibhile ye-Mesh
Itafile yoyilo iMesh
I-anti-drop Wire Mesh
I-Drop Prevention yeNet
Ikhusi le-Mesh elandisiweyo
Isixazululo seMetal sokuhlobisa
Indwangu ye-Metal Sequin
I-Metal Coil Drapery
Ikhusi le-Hook Screen
Izixhobo kunye nokwenza ngokwezifiso
Isisombululo esizenzekelayo seNesting
I-Mesh yeCable Oxide yentsimbi engenanto
Intambo yentsimbi emnyama ye-Oxide Wire yenziwa kwintambo yentsimbi ephezulu yentsimbi, izinto ezibandakanya i-AISI304, AISI316 kunye ne-AISI316L; Ubungakanani boMbane Oxide Wire Rope Mesh ubungakanani bumiselwe ukuze uhambelane ne-balustrade yakho, i-railing okanye isicelo sokwakha; Iimpawu zokudaya-grey kunye nezingaqhelekanga nazo zinokwenziwa ngokwezifiso.
Intambo yentsimbi engagungqi eyakhiwe nge-mesh (Uhlobo lodidi lwangaphakathi)
Iimveliso zethu ze-mesh yentsimbi ye-Flexible ye-mesh inikezelwa kuthotho ezimbini eziphambili: I-Inter-woven and Type yeFerrule. Imiyalezo ye-mwe-eyilukiweyo yenziwa ngesandla eyaye ikwabizwa ngokuba yi-mesh eyelukiweyo eyenziwe ngesandla yenziwa ngentambo entle yeswire. Ulwakhiwo lwentambo luyi-7 x 7 okanye 7 x 19 kwaye lwenziwe nge-AISI 304 okanye iAISI 316 yeqela lezinto. Le mesh inamandla omeleleyo, ukuguquguquka okuphezulu, ukubonakala okuphezulu kunye nobubanzi be-span.I-mesh yentambo eguquguqukayo inezibonelelo ezingenakufikeleleka xa kuthelekiswa nezinye iimveliso ze-mesh kwizinto ezininzi ezifana nokusebenza, ukhuseleko, ipropathi yobuhle kunye nokuqina njl. Njl. abaqulunqi kunye nabayili bezakhiwo kwihlabathi liphela.
I-mesh yentsimbi engagugiyo (uhlobo lwerhasi)
Intambo yethu eguquguqukayo yentsimbi enesitayile esine-mesh eyenziwe ngentsimbi yenziwa kwintambo ye-sswire kwiintlobo ngeentlobo zezinto ezinje nge-SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L njl.njl kunye nezakhiwo ezibini eziphambili zomtya: 7 * 7 kunye 7 * 19. ikhebula di.1mm-4mm nobungakanani be-mesh: 20mm-160mm. Olu luhlu lwe-ferrule luhlu lwahlulahlulwe lube yi-aluminium alloy mesh, intsimbi engenasici, ubhedu olubunjiweyo kunye ne-nickled mesh yobhedu ngesixhobo se-ferrule. Uhlobo lwe-mesh eluhlobo lwe-mesh, isetyenziswa ngakumbi kwimihlaba efana nee-balustrade kwiibhlorho nakwizitepsi, ucingo olukhulu lokuthintela, kunye neesistim ze-facade trellis. Njengomveliso ovelayo kumhombiso woyilo kunye nokukhuselwa, i-mesh yensimbi engenasiseko inike umhombiso we-mordern kunye nobunjineli be-horticulture ngento entsha nenesitayile, efumana ngakumbi kunye noxabiso ngakumbi ngabaqulunqi kunye nabaxumi kwihlabathi liphela.
I-mesh eguquguqukayo yomhlobiso, sinempahla ye-mesh yensimbi, i-mesh yensimbi eyandisiweyo, ikhonkco lokudibanisa i-hook mesh, i-arhente yokuhlobisa iscreen yensimbi kunye neebhloko, njl.
I-Mesh ye-Stainlesss yoLungelelaniso loYilo
Uhlobo Lensimbi engenasiseko
Intambo ye-Oxide emnyama
Inkxaso yethu kwi-Hotline iyafumaneka iiyure ezingama-24 ngosuku: 008615832151814
NgoMvulo-ngolwesiHlanu: 9 am ukuya ku-5pm
NgoMgqibelo: 10 am ukuya ku-4pm
Umnxeba / iWhatsapp: 008615832151814